मल कारखानाको आधारः भ्रष्टाचारमा लगाम र दृढ इच्छा शक्ति
भाद्र २३, २०७७ मंगलवार
केही दिन पहिला हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसीनालाई फोन गरी ५० हजार मेट्रिक टन यूरिया मल सापट माग्नु भयो । र त्यसपछि नेपालमा रासायनिक मलको हाहाकार भयो भनि जोडतोडका साथ चर्चा हुन थालेको छ । मानौ नेपाली किसानलाई पहिलो पटक मलको अभाव भयो ।
विदितै छ, उन्नत बिउ, समयमा मल र वैज्ञानिक सिँचाईको उपलब्ध्ता हुँदोहो भने नेपाली किसानले कृषि जगतमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्छ । गत साता मात्र चितवनमा हजारौ किसानहरु दश किलो मल लिनको लागि कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो परिस्थितीका माझ चर्को घाममा घण्टौ लामबद्ध हुनुभएको थियो । उक्त कष्टमय अवस्थामा किसानहरुले राज्यप्रति कस्तो अनुभूती गरेका होलान भनी हामीले महसुस गर्नुपर्छ । यता दशकौँ देखि कृषि क्रान्तिको नारा लगाउँदा नथाक्ने हाम्रा राजनीति संचालनकर्ताहरुले प्रत्येक वर्ष मलको हाहाकार हेर्दै आइरहेको अवस्था छ र तिनमा गम्भिरता देखिएको छैन् ।
बाली सुक्ने छटपटाहटमा रहेको बेला किसानलाई मल उपलब्ध गर्न नसकेको सरकारी निकाय कृषि मामग्री कम्पनी लिमिटेडले युरिया र डिएपी मल आयात गरी ल्याउने टेन्डर प्रक्रियाम्र झमेला गरेकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो । बिभिन्न छापा मा आएअनुसार विदेशीलाई मात्र टेन्डर अवसर दिलाउने नियतले बनाइएको नयाँ मापदण्डले हाल अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन ३१० डलरमा पाइने युरिया मललाई प्रतिमेट्रिक टन ३७६ डलर तिरेर कुल ३० हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने प्रपण्चको कारण मल समयमा आउन सकेन । विदितै छ, नेपालको कुनै क्षेत्र पनि बिचोलियाहरुको प्रभावबाट अछुतो रह्न सकेको छैन् । संबिधानमा समाजवादको सुन्दर परिकल्पणा गरेका हामीले चाकरपूँजीवाद लाई नरोकीकन कसरी समाजवादको यात्रामा अघी बढ्न सक्छौ ? शिक्षा, स्वास्थ्य देखि कृषि सम्म चाकरपुँजीबादीहरुको बिगबिगी रहेको छ ।
मलखाध खरिद गर्न किसानको भीड चितवन
पछिल्लो तथ्यांक हेर्नेहो भने बिगत दश वर्षमा नेपालमा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको मल भित्रिएको छ । ०६८-६९ मा नेपालको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आफ्नै देशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । तर त्यसको प्रक्रिया समेत अगाडी बढाइएन । र हामीले अर्बौको मल आयात गर्यौ । आखिर किन ?किसानको मुद्दा हाम्रो प्राथमिकतामा नपरेर हो ? वा ठेकदारलाई विश्वासमा लिएर अर्बौको मल आयात गर्दा करोडौमा कमिसन पाउने ग्यारेन्टी भएको ले ?
सन् २०१५ मा लगानी बोर्ड नेपाल ले भारतको परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्टकक्चर प्राली संगको सम्नवयमा नेपाल मै मल कारखाना खोल्नको लागि सम्भाव्यता अध्यन गरेको थियो । अध्यन गरी बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश २ को ढल्केबर र प्रदेश ५ को बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न सम्भव रहेको भनी निचोड निकालेको थियो । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसबारे न कुनै अग्रसरता लिइएको छ न त कुनै चर्चा नै ।
नेपालका झण्डै ६० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित रहँदै आएका छन् । मधेश लाई अन्नको भण्डार भनन्छि । नेपालमा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । केही दशक पहिला मात्र हामी अन्यमूलकलाई धान चामल निर्यात गर्ने ल्याकत राख्नेगथ्र्यौ । तर पछिल्ला केही समय देखि अर्बौको चामल आयातकर्ता हुन बाध्य छौँ हामी । मलाई जहाँ सम्म लाग्छ, हामीले आफ्नो वास्तविक क्षमता र धरातल लाई नै चिन्न सकेनौ । सपिंग मल र भाटभटेनी मा आयातित खाद्यन्न मा आधारित हुनु हाम्रो ठूलो भूल साबित भएको छ ।
बंगलादेशको इतिहाष हामी भन्दा धेरै पछाडीको छ । त्यहाँ पनि लामो समय सम्म राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएको थियो । तर पछिल्ले समयमा बंगलादेशले बिभिन्न क्षेत्रमा फडको मार्न सफल भएको छ । आफ्नो धरातल लाई आत्मशात गर्दै बंगलादेश ले कृषिमा मनग्य लगानी गर्दै गयो र आज लगभग आत्मनिर्भरताको निकट पुगिसकेको छ ।
मलखाध खरिद गर्न किसानको लाइन चितवन
नेपालमा मल रकारखानाको स्थापनाको चर्चा हुँदा यसको लागि ठूलो लागतको चाहिन्छ, नेपाल जस्तो गरिब मूलुकको लागि यो त्यती सहज छैन् भनी आवाजहरु सुनिन्छ । जबकी मल कारखाना खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने चिज हो प्रबल इच्छा शक्ति अनि, भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण, अनुत्पादन क्षेत्रमा बजेट कटौती, कषिको नाममा अवैज्ञानिक अनुदानमा नियन्त्रण र मल कारखाना लाई सरकारले गौरबको योजना अन्तर्गत राख्नुपर्छ । यतीमात्र गर्ने हो भने रासायनिक मल उत्पादनमा हामी सफलता प्राप्त गर्नसक्छौ ।
धन खेतीको समयमा मल को चर्चा हुन्छ । अभाव देखिन्छ । कारण के हो भने नेपालमा अधिकत्म किसानहरु धान खेती गर्छन । तर वास्तविकता के हो भने उँखु, गहुँ लगायत बिभिन्न बालीको लागि समेत मलको उतिकै आवश्यकता पनेगर्छ । किसाले अन्यबेला पनि मल नपाएको अवस्था हामीले हेरेका छौँ । खुला सिमानाको कारण किसानहरु केही हदसम्म भारतबाट मल ल्याउने गर्ने गर्छन । जबकी उक्त कार्य गैरकानूनी हो ।
अन्त्यमा, नेपाल लाई साँच्च्किै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु छ भने एकपटकको लागि हदै सम्मको राजनीतिक र आर्थिक उर्जा लगाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष उन्नत बिउ र मलको समस्यालाई सदासर्वदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी खाद्यान्न आयता गर्दैनौ भने संकल्प लिनुपर्छ, नेताहरुले । र मल कारखाना हामीले निर्माण गरी आत्मनिर्भर बन्नुछ भन,े महालेखा परिक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जसरी भनिएको छ की पछिल्लो ३ वर्षमा चियापान, भोजन लगायतका नाम मा २० अर्ब रकम खर्च भएको छ यसले राज्यको आपत्तीजनक नियती लाई देखाउँछ । यस्ता खर्चमा लगाम लगाएर कृषतर्फ ध्यानदिने हो भने यसले पक्कैपनि नेपालको कायापलट हुनसक्छ ।
लेखक शर्मा नेपाल कम्यिुनिस्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।
Tags: दृढ इच्छा शक्तिभ्रष्टाचारमा लगाममल कारखानारामकुमार शर्मा